Dawladda UK oo saldhig ciidan ka sameystay Soomaaliya. – Puntlandtimes
Dawladda UK oo saldhig ciidan ka sameystay Soomaaliya.
BAYDHABO(P-TIMES)- Saldhigii ciidan ee ugu weynaa ayay dawladda Ingiriisku ka sameystay Soomaaliya, gaar ahaana magaalada Baydhabo, wuxuuna halkii mar martigalin karaa kumanaan Askari oo kamid ah ciidamada UK iyo kuwa Soomaalida.
Dawladda Soomaaliya oo saxiixday heshiiska UK saldhiga ciidan looga siiyey magaalada Baydhabo ayaa sheegtay in uu qeyb ka qaadanayo dib dhiska ciidamada Soomaaliya.
Tababarayaal iyo ciidamo ay si gaar ah u maamulayaan dawladda Ingiriiska ayaa kusugan saldhigan, waxaana inta badan la adkeeyaa ammaankiisa, waxaana sugida Amniga qeyb ka ah ciidamo u dhashay dawladda UK.
UK, waxay taageero dhaqaale iyo mid ciidanba geysaa Baydhabo, waxayna taageertaa laamaha Ammaanka, iyadoo si gaar ah hadda u bilowday qorida maleeshiyaad u gaar ah oo ay mushaarkooda bixinayso.
Dawladda UK, waxay doonaysaa in ay sida Mareykanka saldhigyo ciidan kuyeelato Soomaaliya, waxaana horey ay gacanta ugu heysay ciidamada RRU-da ee Somaliland kusugan, kuwaas oo waajibaadkooda shaqo yahay la dagaalanka waxa loogu yeero Argagixisada.
Talaabada Saldhiga cusub, waxay muujinaysaa sidda ay dawladdaha reer galbeedku ugu hardamayaan meelaha muhiimka ah ee Soomaaliya, waxaana Saldhiga laga hirgaliyey gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo, maadaama uu yahay mid Milateri oo ay horey u dhistay Xukuumadii Siyaad Barre.
Kani waa Saldhiggii 4-aad ee dalalka shisheeye ay ka dhistaan wadanka, waxaana Saldhiggii u horeeyay uu Mareykanka ka sameystay deegaanka Bali-Doogle ee gobolka Sh?Hoose, waxaa ku xigay midka Turkiga ee ku yaala deegaanka Jazeera ee duleedka Muqdisho iyo kan Imaaraatka Carabta uu ka sameystay Magaalada Berbera ee Gobolka Waqooyi Galbeed Soomaaliya.
Bilaaxuduud reerba,oow yaa kuleh(TUSBAXGO,AY SIDIISII MIYAA TOBANBA MEEL AADAY)KHILAAFKA DHEXDIINA HA IDIIN DANbEEYEE HORTA DALKA DHACSADA!,walee falastiintii 2aad baa ii muuqata (KA DHAMAADE WIILASHII DHIIRANAAN JIRAYE)